Ahoana no ahafahako mamela ny overlay Skype? - Skype
Tena > Skype > Overlay ny lalao Skype - mitady vahaolana
Overlay ny lalao Skype - mitady vahaolana
Ahoana no ahafahako mamela ny overlay Skype?
1. Kitiho ny 'Tools' aoSkype'stsipika menio ary safidio ny 'Safidy.' Kitiho ny kiheba 'Antsoy' ao amin'ny pane Fikarohana.
Azo zahana ihany amin'ny farany ny streamlines ho an'ny mpanjifa Mac OS. Fantatro izay fampiasanao, iza no miandry, ampiasainao mac. Tsy mandeha tsara Windows matetika, eny, fa raha ny marina dia samy manao izy roa, fa amin'ny famoahana ny Stream Labs ho an'ny Mac dia hojereko indray.
Andao ary handeha hamaky ny fananganana sy ny toerana azo atao tsara indrindra amin'ny Screenlab amin'ny Mac OS. Hey, miarahaba anao Swan Techno Tim ary mifantoka amin'ny filalaovana streaming sy ny haitao aho. Andao hiresaka momba ny Streamlabs ho an'ny Mac OS, amin'izao fotoana izao dia efa fantatrao angamba ny OBS ho an'ny Mac OS na OBS ho an'ny Windows ary na ny Stream Labs ho an'ny WindowsStream Lamps dia namoaka client client macOS izay mandeha amin'ny Mac.
Androany dia hapetratsika amin'ny Mac izany ary handalo ny toerana mety indrindra ahafahanao mahazo 1080p 60fps. Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny mankany amin'ny Stream Labs Comm ary alao ny mpanjifa Mac OS vaovao. Okay raha vao misy stream avelao hisintona ny mac client, zavatra iray hafa ilaintsika ny misintona dia ny fiasa hisamborana audio amin'ny birao ankehitriny tsy sahala amin'ny Windows Mac OS tsy afaka misambotra audio desktop fa ity misy fampidinana izay azo ahitsy amin'ity fomba ity dia mamporisika ny fampidinana ny I ' Hampiseho ny fampitaovana Audio Recording izay mandrisika anao hanomboka indray, angamba tokony hanombohana indray isika izao ka andao hizaha fa napetraka tsara izao ka andao hiditra amin'ny sehatra.
Ho tsara ny audio ary ho hitantsika eto fa voatanisa ao amin'ny asehoko anao ireo sary voaray, midika izany fa napetraka tsara izy. Ankehitriny dia mila manamboatra ny multi-output isika mba hahafahantsika mirakitra feo avy amin'ireo zavatra toy ny lalao amin'ny Mac na mpitsidika antsika ary ny zavatra hafa rehetra. Ka andao hitady ny fametahana audio midi ary hamita ny sisa amin'ny fikarohana audio dia napetrany izy ka andao hamorona fitaovana multi-output izao tsindrio miampy fitaovana fampivoarana marolafy izao andao hifidy ireo fitaovana tadiavintsika ireo Output Audio ka Tiako ho any amin'ireo mpandahateny ahy ity ary koa ny rakipeo an-tsary asehoko anao, tianay antoka ve fa voamarina hatrany izany ka tena zava-dehibe ity dingana ity.
Tianay ho azo antoka fa ny fanitsiana haingam-pandeha dia tsy ampiharina afa-tsy amin'ny fitaovana ampiasaintsika. Ka esory ny safidinao Ishow anao ary zahao raha headphones na fitaovana famoahana hafa ampiasainay ny mpandahateny anay, io dia miantoka fa tsy misy fahatarana audio eo anelanelan'ny fitaovana ampiasainao. Eny ary, andao hiverina any amin'ny sehatry ny feo ary safidio izao fitaovana izao, mandehana any Soundokay.
Raha nifidy an'ity ianao dia hamita ny fametrahana ny Stream Labs ary hametraka ny Okay, noho izany dia manomboka ny mpiorina hanaiky Raha manaiky an'io ianao dia sintomy ao anaty ny fiseraseranay izany. Akatony izao izao. Azontsika atao ny manipy an'io ary andao mankany amin'ny rindranay ary hanomboka Streamlabs.
Lazao ok eto. Te-hiteny aho eny - angatahina isika ankehitriny hampifandray ny kaonty mivantana. Izy io dia manohana ny mixer YouTube an'ny TwitchFacebook D Live Nemo TV, saingy mivezivezy ao amin'ny Twitch toy izany aho, hisafidy an'i Twitch aho, ankehitriny hampifandray ny teknikan'ny serivisy Twitch Tim sy ny tenimiafintsika isika, koa izao dia mangataka lafin-javatra roa, antenainao hampiasainao manontany aho izao raha manana alalana hanao izany rehetra izany ho anao ao amin'ny Twitch Account i Streamlines, izay fenitra tsara ho an'ny laboratoara mikoriana hahafahantsika mamely ny Autorisation ka safidy tsara dia tsara eto.
Ka raha efa manana toa ny amin'ny Mac-nao ianao dia afaka misafidy ny manafatra ny seho napetrakao sy ny fikirakiranao, fa raha tsy izany dia afaka manomboka vaovao fotsiny ianao Andao hanomboka indray, ka ity dingana manaraka ity dia ny fisafidianana ny fakantsaranao ary hofidiko ny webcam anatiny , fa manana safidy eto ianao hisafidianana fakan-tsary hafa ary mitovy amin'izany amin'ny mikroponinao. Azonao atao izao ny misafidy lohahevitra iray hanombohana raha tsy manana izany ianao, afaka misafidy iray amin'izy ireo ianao na afaka misafidy vitsivitsy aorian'izay, noho izany dia hotsipiko io izao, ka ny manaraka dia ny mpamosavy tweak, izay manao zavatra toy ny CPU-nao, ny GPU-nao ary koa ny fitsapana ny hafainganana amin'ny Internet hanampiana anao hahazo ny toerana mety indrindra andao hojerentsika izay lazain'izy ireo fa azontsika atao ny mamadika izany avy eo, okay, mitsambikina fotsiny any amin'ireo laboratoara mikoriana ary tsy nitatitra ny valiny, fa andao hojerentsika hoe iza ianao. Ka raha miditra amin'ny sehatra isika dia handefasana, hivoaka ny vokatra, okay ka nanao asa tsara tokoa izahay tamin'ny famaritana ireo fikirako mivantana, tena akaikin'ny zavatra hofidinay izany, fa izahay kosa midira ao aoriana ao ok, ka ndao hojerentsika hoe inona koa no efa namboarina hatramin'ny nampifandraisintsika ny kaonty Twitch.
Tokony efa nampifandraisintsika ny renirantsika Twitch ary eto dia tena mahafinaritra satria nifandray tamin'ny hetsika rehetra nataontsika isika, okay ka tadidio ny fomba nanaovanay ny fanamafisam-peo fotoana lasa izay, andao hamita ity sohop ity amin'ny feo ary afaka mahita ny mikrônintsika isika efa miasa mozika ho tsikaritrao fa tsy hilalao izany ka eto ny fomba fanamboarana azy miverina any amin'ny setting ary mandeha amin'ny audio ka safidiko ilay izy dia hasehoko anao ny audio ho fitaovana ampiasako azy - ary raha vao misafidy aho dia ianao ' ho hitantsika fa tonga amin'ny alàlan'ny feon-tsika ny audio. Ka rehefa miato sy milalao isika dia tsy maintsy avadiko kely izany mba hananantsika webcam Manana mikrô izahay Manana audio audio amin'ny birao izahay mba hahafahantsika mitendry mozika, mifandray indray amin'ny kaontin'i Twitch isika, ka ndao jerena ny manodidina antsika, ka andao misafidy lohahevitra misongona ary apetaho. Tsara be io rohy ambony io, na ny manarona dia manana rohy vitsivitsy aho ao amin'ilay famaritana etsy ambany ahafahanao misintona bebe kokoa, okay ka izany no seho fanombohana an-dàlana andao hamboarina ny seho lalao mba hahafahanao mahazo hevitra momba ny fomba handaminana azy okay andao hisafidy ity lalao atsivalana ity mba hanana tetezamita mahafinaritra ary ity ny sehatry ny lalao ka andao hanao zavatra roa hanesorako ity zavatra eto ambany ity satria tiako ny metrika rehetra ato ambony ebcam toa antsika enina ambin'ny folo amin'ny sivy nisafidy iray, andao hifindra eto ny webcam-nay ary toa tsara ary andao hialana eto ambonin'ity takelaka kely ity eto, tsy dia manana zavatra holazaina aho izao, andao ampidirina ny webcam-tsika ka andao tsindrio eto izany Source on Plus Select a Video Capture Device Kitiho ny Add Let's name this webcam and here you select the webcam device for you to use may have a c920 or other webcam or cam link connected to a mirrorless camera here select it from this frame, so apro tip here if you need a fine tuning azonao atao ny mampiasa ny bokotra arrow manitsy ny toerana.
Eny ary, tsara ny fametrahana azy, andao hisintona ity loharano ity ho amin'ny webcam somary tsara kokoa, angamba ny jiro kely kokoa, saingy mirakitra an'io aho izao fa azonao tsara ilay hevitra, koa maninona raha apetrakao ny hafatra fampitandremana. Ny zavatra voalohany hataoko dia ny mamindra ireo fampitandremana ireo etsy ambony ary tiako ho eo an-tampony ireo fampitandremana ataoko hisintona azy ireo eny, okay ka eo an-tampon'ny fampitandremana izao dia aleo apetraka ny fampitandremana azonao apetraka amin'ireo izay tianao. ' d toa ny sasany mety tsy hanelingelina loatra, fa hapetrako eo afovoany izy ireo ho an'ny adihevitra andao atao fa somary lava kokoa izy ireo, okay ka andao izao hizaha toetra ny fampitandremana mba tsy mbola niresaka isika momba izany, fa ity dia iray amin'ireo singa mampiavaka ny Stream Labs OVS, miorina ao ny fanairana ary azontsika atao ny mizaha toetra azy avy eto. Ka raha mijery ny farany ambany ianao dia mahita ireo widgets fitsapana izay tsindrioo fa afaka manitatra izahay ary mahita fanomezana fanoratana aorian'ny Bitshost, ka ndao hizaha toetra hanaraka sy hijery izay toa mety, misy ny fampitandremana tsara azontsika avy amin'ny nerd na izay toa tsara dia tsara izao, fotsy izy ireo ka andao ampanjifaina ho fotsy ny UI ary ny fomba mora indrindra hanaovako izany dia ny fametrahana sivana fotsiny ary avy eo esory ny mahavoky, mamorona sivana izy io, manampy fanitsiana loko, okay tsara tarehy ity tsara aho izao manana an'ity zavatra mainty sy fotsy ity, ankehitriny dia azontsika atao ankehitriny ny be ny zavatra hanome anao ny safidy hanamboarana loko ao anaty ny lohahevitra, saingy nanampy sivana isaky ny kisary sy singa tsirairay aho mba hahafahako manala ny loko ny tenako no eritreretiko, ary homeko anao aza ole ol fotsy, fa na amin'ny fomba ahoana no mety, dia avy eo hafa x Ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny manampy ny loharanom-pilalaovantsika raha te handefasa ny birao iray manontolo ianao. te-hilalao lalao eo an-toerana amin'ity solosaina ity na handefa streaming hafa atiny, asio birao -Source hanaovana an'ity ka tsindrio plus mandefa fisamborana efijery ary ankehitriny mifidy ny fampiratiana izahay, ka mifidy ny fampisehoana 0 satria io no misy antsika ary misarika ny fampirantiantsika manontolo izany.
Ny zavatra iray tianay hatao aorian'ny namoronana azy dia ny misintona ity. Tianay ho ity no farany ambany indrindra taty aoriana, noho izany fampahatsiahivana, tsara izany raha te-handefa ny birao iray manontolo ianao, fa ahoana kosa raha te-handefa lalao mifandraika na fampidirana HDMI hafa ianao, ka andao hifidy zavatra toa ilay fitaovana fakana lahatsoratra noho izany izahay dia manafoana ny firaketana an-tsehatra ka tsy manoratra ny biraonay intsony izahay ary manampy fitaovana fakana lahatsoratra loharano loharano vaovao mba nametahako rohy cam ho azy. Ny rohy cam dia mamela ahy handrakitra izay fampiasa HDMI ka safidiko ity ary te hanampy loharano indray izahay mba tsy ho hitanay eto ny rohy cam anay, noho izany mila manodinkodina an'ity bokotra ity izahay ary hilamina tsara etoana ny fikirakiran'ny lahatsoratrao. andao hafindra any amin'ny farany ambany amin'ny lisitra okay tsara isika fa tsara be izao, andao hizaha toetra ny fampitandremana mba ho tsara izay manaraka, noho izany dia afaka miasa tsara ianao, afaka manohy manitsy ny sarinao ihany ianao fa hitsambikina ao anaty ny setting ankehitriny ary andao jerena ny fikirakirana vokarantsika.
xbox manamboatra hafatra
Tianay ny mahazo antoka fa mahazo ny toerana mety indrindra amin'ny 1080p 60 frame isaky ny segondra streaming. Ny zavatra voalohany tianay hatao dia ny manova an'ity hanitarana ny fomba famoahana ary afaka mitazona ny làlana audio amin'ny 1 isika dia afaka mamela ny encoder amin'ny rindrambaiko x264. Midika izany fa ao amin'ny CPU-nao daholo ny kaody nataonao.
Raha hitanao fa mampiasa CPU be loatra ianao rehefa mampiasa Stream Labs sy Streaming, azonao atao ny manova azy io ho an'ny Apple VT h.264 Hardware Encoder izay mametaka io encoding io ho any amin'ny encoding chip, fa izahay kosa x264 manaraka izay ataovy izay hahazoana antoka fa tsy mahazo ' t hanavotra ny vokatra eto ary ho an'ny fanaraha-maso ny hafainganana dia tianao ho azo antoka fa ao amin'ny CDR io. Tianay ny taha kely tsy tapaka ka ny taha kely indrindra amin'ny Twitch dia 6500, tsy mampiasa haben'ny buffer manokana izahay ary hanaparitahana ny fampiasana CPU dia azonao atao ny mitazona haingana azy roa raha hitanao fa mampiasa CPU be loatra ianao. ahenao ho haingana loatra na haingana be izao izay tokony ho tsara dia haingana dia hitazona ny mombamomba satria tsy misy ary hotehirizinay ny fitanisana an'i Xlet handeha amin'ny audio miaraka amina audio azonao atao ny mitazona izany amin'ny efatra ambin'ny efapolo kilao kilao ary ho an'ny fantsom-pifandraisana ity mijanona Astaral, manana ny safidinay audio izahay napetraka teo aloha, ka tsy mila manova na inona na inona izahay fa jereo hoe efa voalahatra ireo ary ao amin'ny lahatsoratra tianay hofaritana fa ny vahaolana amin'ny canvas fototra dia 1920 amin'ny 10 ary tianay ny manova ny vokatrao nohamafisina araka ny tokony ho izy ny vahaolana ka andao apetraka amin'ny 1920 x 1080, izay midika fa ny birao dia amin'ny 1920 x 10 80 dia ary hikoriana manaraka isika amin'ny 1920x1080 ny sivana downscale izay tsy tokony ho zava-dehibe satria tsy tena scaling izany. , fa ny toe-javatra tsara indrindra dia ny karazana lynx-os SharpensBrett PS dia k ataovy izany amin'ny soatoavina mahazatra izay hizarantsika antoka fa voafaritra ho 60 io ary tsy hanova na inona na inona amin'ny hotkeys izahay ary tsy hanova na inona na inona amin'ny fanangonana seam mandroso tsy hanova fampandrenesana fa tsy hanova ny ray aman-dreny tsy hiova ary lavitra tsy hanao miova manaraka dia hanova ny fisainantsika eto izahay no anaovanao azy, kitiho eto ity takelaka ity ary mankanesa ao amin'ny Layouts ary eto no ahafahantsika misafidy ny toerana misy ny singa tsirairay mivezivezy ka toa tsara be izany amiko saingy tiako ny mitsangana ny tongotro ho anao Afaka misafidy preset vitsivitsy ianao eto, ary tena tsara izany, saingy raha te hanova azy ianao dia azonao atao fotsiny ny manosika azy any amin'izay tianao, fa tiako tokoa ity ka andao hitahiry tsara ny fanovana. tsara kokoa kely izany fa manana ny tongotro keliko ankavia izay ahitako ny zava-mitranga rehetra manana ny varavarankely lehibe ataoko eo afovoany aho ary avy eo manana fanaraha-maso hafa any ambany rihana ary raha tianao dia misy chat chat eto amintsika eto, ary mety tsara ho ahy ity. afaka mijery ny zava-bitako mamerina ny hetsika nataoko Rehefa te hahita ny loharano niaviko rehetra aho dia afaka mahita ny entako rehetra izay hitanao ao amin'ny mixer audio, ary manana resaka eo ankavanana aho, ka vonona izahay hiaina izao, izay rehetra ilainao tsindrio ny bokotra mandeha mivantana ka marina tsara izany raha ny fijerin'ny Stream Labs OBS ho an'ny Mac ary mahatsapa mitovy amin'ny kinova Windows, izay antenaina sy hahatsapa tena izy, koa raha avy any Windows ianao ary mampiasa Stream Labs amin'ny Mac, na mampiasa OBS amin'ny Mac ianao, azonao atao izao ny mampiasa Stream Labs OB amin'ny Mac OS Ka mba ampahafantaro ahy amin'ny hevitra etsy ambany ho fampahatsiahivana fa mandeha isaky ny talata, alakamisy ary asabotsy aho raha manana fanontaniana momba an'ity lahatsoratra ity ianao na izay lahatsoratra hafa nataoko, mitsangantsangana ao anaty renirano aho ary faly aho raha mijery tsara an'ity lahatsoratra ity ianao ary raha tianao ity lahatsoratra ity dia aza adino ny manome azy ireo thumbs ary kitiho ny bokotra subscribe. ary mandehana mankany amin'ny namako mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka
Ahoana no ahafahako mamela ny lalao misongona?
manome fahafahanany Steampetaho takela
Sokafy ny client Steam ary mankanesa any amin'ny Steam>Fikirana/ Préférences> In-Tapaka nykiheba Jereo ilay boaty eo akaikinyTadiavony Steampetaho takelaraha ao-Tapaka ny.
Manao ahoana daholo. Tongasoa eto amin'ity lahatsoratra ity. Androany izahay dia ao Discord ary hasehoko anao ny fomba hampiasana sy hametrahana ny takelakao mba hisehoan'ny Discord mandritra ny lalao.
Mba hametrahana izany dia mila miditra ianao ary manokatra ny tsy fitovian-kevitra. Ary avy eo mandeha any amin'ny toeran'ny mpampiasa ianao, izay hita eo amin'ny zoro ambany havia. Raha mampiasa fitaovana finday ianao dia afaka mandeha any amin'ny toerana misy azy ihany koa.
Eo ambanin'ny safidin'ny mpampiasa. Te handeha amin'ny iray ianao izay milaza fa apetaho io dia ho eo ambanin'ny filalaovana lalao. Vantany vao nisafidy ny Overlay ianao dia hahita zavatra azo alefa ao anaty lalao tampoka.
Raha zahana amin'ny toerana tsy ahitanao ny maitso ity dia midika izany fa matetika tsy miseho. Fa raha mandroso isika ary manamarina fa mampiseho marika marobe eto, dia hitantsika ny hidim-baravarankely takelaka. Ity no hotkey manokatra ny overlay.
Ary, tendron'ny pro eto, ny fiovana dia ampiasaina amin'ny lalao maro ho an'ny sprint sy mekanika lalao hafa, eh, ao anatin'ny lalao PC. Uh, ary ny hataoko dia misafidy sarintany an-tanandehibe eto. Tsy hanelingelina ny lalao izany, hanovana an'ity sarintany ity, tsindrio fotsiny na aiza na aiza eto ambonin'ny toggle overlay.
Ary haseho amin'ny loko mena izay mampiseho fa alaina izy io, avy eo misafidy lakile hafa. Handeha aho miampy alt plus Q. Ka hotazomiko ny alt plus Q ary hiova ny overlay amin'ny lalao rehetra ataoko.
Manaraka, ho hitanao eto ny toerana maro samihafa, toy ny anarana aseho ho an'ny haben'ny avatar. Aza manao an'izany rehetra izany eto. Mora kokoa ny manao azy raha mahita azy ao anaty lalao ianao.
Misy fomba iray hanaovana izany. Hasehoko anao afaka iray segondra. Raha mahita kisary mena ianao eto, dia tsy mandeha ny overlay, ny sisa ataonao dia tsindrio eo amboniny mba hametahana ny takelaka, ka alao antoka fa ho an'ny lalao ezahinao hampiasaina ny takelaka amin'ity, dia tena nifindra noho ny off.
Manaraka izany, te-hanidy tanteraka ny tsy fifanarahana ianao ary avy eo manokatra ny tsy fifanarahana. Tsara izany, nataoko izany. Nosokafako indray ny Discord.
ovay ny layout onenote
Hiverina eto aho miaraka amin'ireo fikirakirako overlay. Ankehitriny dia hanokatra ny lalao aho. Eny ary, eo amin'ny lalao aho izao.
Ny ataoko izao dia mandeha ary manindry ny hotkey izay namboarinay tao anatin'ny Discord. Ka ho ahy dia efa taloha miampy Q ary hiantsoana sy hiantso ny eto amboniny ny overlay. Ny overlay Discord.
Avy eo te-handeha any amin'ny toerana misy anao aho eo amin'ny zoro havia havia izay aseho ny fametrahana takona. Ary araka ny ahitanao ny toerana fampandrenesana dia azoko atao ny manova azy amin'ny ankavia, ankavanana, na amin'ny farany ankavia sy havanana. Na azoko atao ny mamono azy ireo amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny an'ity tovolahy kely eto na amin'ny fanindriana ny marika etsy ambany.
Hiavaka kely izao ny feo, Avatar, raha ao amin'ny fantsom-peo ianao dia ho hitanao ny avatar anao na aiza na aiza aseho ireo fampandrenesana. Ka miaraka amiko any amin'ny ankavia havia. Matetika aho no misafidy ireo kely ireo.
Tsy dia manelingelina firy izany. Ary avy eo dia te-haneho anarana foana aho na rehefa miteny fotsiny na tsia. Matetika aho manao izany rehefa miresaka aho ary avy eo mampiseho ny mpampiasa indray, rehefa miteny fotsiny aho, satria rehefa feno fantsom-pifanakalozan-kevitra feno ianao dia tsy mila olona 10 na 15 haseho eo amin'ny sisin'ny efijeryo.
Ka raha vao manana ny toe-javatra araka ny itiavanao azy ireo ianao dia mandrosoa ary fenoy. Tsara izany. Ary ankehitriny niditra tao amin'ny fantsom-peo aho.
Ary raha zokinay eto amin'ny zoro ankavia ambony amin'ny efijery misy ny fampandrenesako dia azonao atao ny mahita ny avatar sy ny anarako manomboka miteny zoro havia havia ambony. Raha tsy miteny intsony aho dia tsy eo intsony. Io no fomba fiasan'ny overlay raha ny fantsom-peo.
Ahoana ny fomba hampiasana sy hametrahana ny takelakao. Manantena aho fa nanampy izany, raha nisy izany, aza adino, mandrosoa ary hisoratra anarana dia ho hitako ianareo amin'ny lahatsoratra manaraka.
Ahoana ny fomba fampiasana Skype rehefa milalao?
fandefasanaskype, atombohy amin'izay olona kasainao hatao ilay antsomitendrymiaraka, ary avy eo mandefa ny lalao. Mazava ho azy fa natao ho an'ny resadresaka nifanaovan'ny mpinamanaraha mbolain-lalao. Tsy manao izany ianaomampiasa Skypeho an'ny lalao ampahibemaso na amin'ny randoms.18 jolay 2015
Tsara izany ary, inona no ataonareo lehilahy fa miandry ny zanakalahy Brendan na Matrix ianao ary manantena fa hahita andro mahafinaritra be ianareo rehetra any an-tranon'ny mpilalao toa ny manao rakipeo collab ary azoko atao ny mi-skype any aoriana Manao antso toa miresaka ry zareo samy izy fa tsara be ry zalahy, hasehoko fa tena tokony hataonareo izao, tsy ho toy ny iray amin'ireo zavatra izay toa nasehoko taminareo ny fomba fa toy ny nisintona andiany iray manontolo aho miaraka fa tsy ara-bakiteny, eny, te-hisintona zavatra tokana ianao, tsy mila misintona programa iray akory ianao, mijery ny lahatsoratra youtube raha hanao zavatra mitovy amiko hoy ny olona iray fa tsy tena misintona ianao. programa Razer izay tena tsy mila anao, tsy mila ataonao mihintsy, raha olona mahay ianao X manana atidoha ianao dia afaka mahita, mino aho fa mahazo x, mahazoa tsara tarehy mora be aho oh ny zavatra hataonao dia hanana ascene misokatra aho eo amin'ny sehatra misy ahy dia antsoina hoe ps4 izay manana ps4 aho ary drafitra bla ck ops 3 tianao ho anao aho Background ary araka ny ahitanao ny fahazoako ny lalao any ambadika, azonao atao ny mizara fa tena manana be dia be aho izao izay ananako, fa manana loharano telo ao amin'ny seho PS4 aho. Manana firaketana an-tsoratra aho - manana firaketana lahatsoratra roa aho, ny iray ho an'ny Elgato ary iray ho an'ny webcam-ko ny zavatra hitanao izao ary ny iray hafa dia iray amin'ireo fandraisam-peo ary raha ny firaketana no tena ampiasako handraketana ny antso Skype ny zavatra hataoko izao dia hisokatra skype aho fa hanao ilay bandy haingo kely fanamafisam-peo kely azonareo raketina an-tsoratra hafatra eto raha tena asehoko anao fa mandeha io ary izany no fandraisanao antso an-tsarimihetsika skype, ka aleo mankanesa any Itokay vetivety ary amin'ny lafiny iray dia zavatra kely fotsiny ny antony tsy ahitako azy ireo satria tena nanao skype aho raha ny marina dia naka ny rehetra tafiditra ao anatin'izany izao dia midika izany fa tsy antsoiko amin'ny lalao ary eo ambanin'ny webcam-ko, dia raha manaporofo ianao fa misokatra izy io, dia tsindrio fotsiny ny editcene, izay tsy ataoko amin'ny ankamaroan'ny Youtubers amin'izao fotoana izao, aza ataovy tsindrio ilay edit hitanao ao aoriana. eny, tsy mbola manao vazivazy aho, ohatran'ny hoe eo i Louie, tsy manao vazivazy aho, okay le Raha izaho dia ataovy haingana ilay iray, dia handeha soa aman-tsara isika, ka sokafako izy io alohan'ny hanoroako anao ny fomba hanaovana izany, alohan'ny hanaovako azy tsara dia nanampy aho fa tsy nanampy tsy hoe aiza marina aho aiza no misy ny safidy nataoko raha mandeha any amin'ny toerana misy anao ianao ary te handeha ianao dia tsindrio fotsiny ny mic ary ampiasao ny mic tianao hampiasaina dia mampiasa snowball manga aho handraisana an'izany ary hanao izay tianao ny mpandahateny ha ave ianao ary mamonjy save ary fantatrao ihany ny akama, afaka vitanao ny tenanao, eny, eny, eny, okay, noho izany dia hanomboka antso skype misy skype ao aminy aho izao. Handefa hafatra aho ary hoentin'izy ireo ho ahy ny lalana alehantsika, amboary Tongasoa eto amin'ny serivisy fanandramana Skype aorian'ny bip azafady raketo hafatra aorian'izay, ho entina miverina aminao ny hafatrao. dia fitsapana iray ho an'ny YouTube nolazaiko taminao fa mandeha izy, koa mampitahory fitsapana YouTubers iray hafa telo telo ity dia ho an'ny YouTube no nilazako taminao fa toy izao ary azonao atao ny mamarana ny antso Skype any, izany sisa no hataonao. kely kely aho te-hanao kely ny zavatra rehetra tokony hataonao ary na dia tianao ho fantatra aza ny fanaovana azy amin'ny headset tsy misy tariby izay tena ampiasaiko eto, headset tsy misy tariby io, tsy manelingelina na azonao atao Raha manao izany ianao amin'ny fampiasana headset tsy misy tariby Ny olona tianao dia tsy mety tsy tia mampiasa am-pitandremana amoron-dranomasina sternal eo am-pandriana eutet PI azonao atao, mety hiara-miasa amin'i Logitech tsy azoko antoka tsara izany fa tsy mandeha amin'ny wildsets / mametraka anao manana sefo deck toy ny tariby analog izay ampiasako eto izay tafiditra ao? ny mpanara-maso ahy ary ary raha te hanatsara ny itas X ianao dia ampidiro ny monitor-ko, avy eo eo izy io azoko antoka fa afaka mahita azy eo noho eo ianao, andraso efa ho eo eo no ahitanao sakana kely eny izay inona izany fa ny tariby ataoko izay anao webcamis latsaka any, noho izany eny, tsy afaka mampiasa headset tsy misy tariby ianao raha tsy manana tariby analog miaraka amin'ny tendrony roa.
Fantatr'izy ireo fa lahy izy ireo, eny, e, ary tena mila miverina amin'ny tifitra aho ary tokony hasehoko anao fa tena mandeha ilay seho, koa andao hiverina any amin'ny katsaka ihany aho, eny, saingy olona iray izahay Niady taminay izahay, um OBS, saingy nanomboka niasa aho ary ry havako, mazava ho azy fa ny webcam-ko dia niova hatrany ambony ka hatrany ambany satria ny fakan-tsariko dia efa voarakitra teo aloha teo mba hahafahako mandingana azy io, ka lasa aho, izany indrindra no toa feon'ny fanaka ezahiko andrasana kely hahazoana antso ao dia izay ihany no tokony hataonao ary azafady rey ​​olona toa fitsapana ho an'nyYouTube ity tranga nolazaiko anao ity fa haokay misaotra anao fitsapana 1 2 3 izay mora kokoa aminao ihany koa ary afaka maheno ny feoko ianao fa tsy ny feoko ary azonao ny fiafarany ary eny izay tena tsara tokony hataonao hialana amin'ny fiantsoana rakipeo avy amin'ny skype fa tena mora izany ary raha nankafizinao ity lahatsoratra ity, raha hitanao fa mahasoa azy dia tazomy fotsiny eto ambany ary misorata anarana raha tsy manana ministera amin'ny pea ce efa
Inona no overlay Skype?
SKYPEARCHITECTURE Skypedia antakelatambajotram-pifandraisana. Misy karazana node roa atotakelatamba-jotra, mpampiantrano tsotra ary super node (SN). Ny mpampiantrano tsotra dia aSkypefampiharana izay azo ampiasaina hametrahana antso am-peo sy handefasana hafatra an-tsoratra.
Inona no atao hoe tamba-jotra Overlay CohesiveNetworks? Voalohany fampidirana fohy ny Cohesive Networks Manana fiankinan-doha amin'ny fiarovana sy ny fifandraisana antsoina hoe V sy s3 Izy ireo dia manampy anao hiaro ireo rafitra sy fampiharana mifototra amin'ny rahona Manana mpanjifa 2000 mahery any amin'ny firenena 22 amin'ny indostria sy sehatra rehetra izahay Ny tambajotranay dia tamba-jotra 3 virtoaly 6 miasa ny tamba-jotra VNS 3x amin'ny alàlan'ny router virtual switch switch firewall VPN mpizara mpiorina protokol ary azo itarina, noho izany inona ny overlay amin'ity sary ity dia topolojia tsotra miaraka amina foibe angon-drakitra miorina any Chicago ary birao lavitra any London no mampiasa ny Internet ho an'ny daholobe hifandray. amin'ny loharano rahona ao amin'ny foibe data cloud dia misy tranga virtoaly na milina virtoaly, ny VM tsirairay dia mihazakazaka amin'ny mpampiantrano ara-batana na hypervisor mifandray amin'ny switch, ny switch tsirairay dia ampifandraisina amin'ny firewall fa tsy ny router ary ity sisiny -Router dia manome fifandraisana rahona amin'ny ny Internet t Ireo toerana telo ireo dia mifandray amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny switch, firewall ary ny router. l Topolojia telo dia misy fitambarana fitaovana ara-batana sy virtoaly, sosona maromaro ary karazana virtualization. Antsoinay izao ny fananganana ity ny haavon'ny zanatany raha ampidiro ity switch switch firewall virtoaly ao amin'ny B sy s3 ity ary misy topology teratany mitovy ihany ao, fa miaraka amina mpanampy suite vns fanampiny amboniko ary ny s3 dia rindrambaiko madio Appliance mihodina ao anatin'ny hypervisor host.
azo antoka ny mpamily
Izy io dia mamorona tamba-jotra mandrakotra ao amin'ny rahonao izay manasaraka ny mombamomba ny tambajotra sy ny toerana misy ny tamba-jotra. Ny VNS 3 Controller X dia switch virtoaly izay manome fifandraisana mihoatra ny tsirairay amin'ireo host compute ary manova ny fifamoivoizana eo anelanelan'izy ireo dia miteny amin'ny s3controller ho mpizara mpanjifa ary hitan'izy ireo fa ny mpanara-maso VNS 3 ho hop lojika manaraka. Ny NS 3 dia namboarina tamina subnet izay manome azy isan-karazany amin'ny adiresy IP ho an'ny mpanjifa-mpizara dia mamela anao hiditra iray amin'ny tambajotra Ny tsipika mena roa ao amin'ity ohatra ity dia ireo tunnel IPSec ho an'ny Wiendrei Continuations Roller amin'ny lavitra Ny firewall samy any Londres sy i Chicago dia samy manana fehin-kevitra roa samy hafa ao ambadiky ny teboka farany dia amin'ity ohatra ity subnet lavitra, raha toa ka mbola ampitaina amin'ny tambajotran-tany ireo fifamoivoizana data miaraka amin'ireo fitaovana teratany B sy s3 lojika mitovy amin'ny fitaovana, mba hanomezana takelaka fiasan'ny tamba-jotra ny mpampiasa fivarotana Vienna dia afaka misafidy ny adiresy IP isaky ny mpizara mpanjifa eo amin'ny rahona ampahibemaso ary ireo IP misimisy ireo dia azo idirana na avy any Londres na any Chicago.
Mariho fa ireo fitaovana teratany dia mbola ao anaty topolojia ary mbola manome fifandraisana ara-batana sy virtoaly tera-tany ahoana raha mila manana fahita ianao Ity sary ity dia mampiseho ny topolojia tambajotra mitovy amin'ny vn telo fanampiny azo omena rehefa mijery ny maso telo ny mpanara-maso. fampandehanana vaovao ary zarao ny mari-pahaizana momba ny mpanjifa sy ny antsipirian'ny fifandraisana. Ny mpizara mpanjifa mifandray rehetra dia afaka mifandray amin'ny iray amin'ireo mpitantana roa ao amin'ny roa tonta mpanara-maso manomboka miditra amin'ny mpanjifa, na iza na iza Controller mifandray amin'ny mpizara mpanjifa amin'izany fotoana izany, ny fifandraisana IPSec rehetra amin'ny mpitantana roa dia azo alefa amin'ny alàlan'ny roa mpanara-maso sy amin'ny alàlan'ny client-server, avy eo ny vahaolana avo lenta f3 dia manana asan'ny failover mandeha ho azy ary tsy mila fidirana an-tsehatry ny mpampiasa. Controller ov erlay tambajotra failover avo azo, fa ara-teknika tsy IPSec tsy mahomby amin'ny teboka farany raha toa ka miasa func mihetsika dia mila manao standby mafana, noho izany raha ny VN s na ny tsy fahombiazan'ny mpandrindra dia ianao no mena lehibe X.
Lazao ianao, ity no mpanara-maso voalohany .Raha misy antony tsy misy amin'ny mpanjifa io dia afaka manandrana mifandray ho azy amin'ny mpizara hafa mifandraika amin'ny pology ny mpizara mpanjifa izany dia mampiseho ny tsy fahombiazan'ny mpanara-maso 1 ary avy eo ny mpanara-maso 2 dia mandray anjara andraikitra voalohany amin'ny mombamomba ny maso ny maso dia manome tambajotra avo lenta failover fa tsy misy failover IPSec Enga anie ny teboka IPSec anao dia hamorona ny lisitry ny namana ary tokony hanana ny failover IPSec azy manokana ka raha fintinina ny NS3x dia router iray hafa switch switch protokol protokol firewall VPN mpanentana ary azo ovaina ho an'ny sarany Ho fampahalalana bebe kokoa, vakio ny antontan-taratasy fanohananay VN s3 dia ao amin'ny m Clouds Public Tersao misy rahona tsy miankina ary Virtual Infrastructure VN s3 dia manohana ny ankamaroan'ny vahaolana IPSec miorina amin'ny foibe angon-drakitra. Raha manana fanontaniana ianao dia andefaso mailaka ny varotra ao amin'ny Cohesive Network na Chicagoat Coakley Subnet na raha manana olana amin'ny tamba-jotra Cohesive Have ianao
Ahoana ny fanamboarana ny safidy MS Pop overlay popup 1?
Ahoana ny fomba hamahana ny safidy Pop-Overlay Pop-Pop 1: Atsaharo ny Game Bar. Ny fomba tsotra indrindra dia ny fanombohana ny famahana olana amin'ny alàlan'ny fanalana ny Game Bar fotsiny. Mety hanampy ny fanesorana ny fitambarana manan-danja sy hampiasana azy amin'ny tanjona hafa. Ankehitriny, azonao atao ny manaraka ireto dingana ireto: tsindrio ny bokotra fanambarana Win + I hanokafana ny fanovana Windows; Mandehana any amin'ny Gaming & gt; Toeram-pilalaovana.
Ahoana no ahafahako mitazona ny Skype ho eo an-tampony foana?
Hitazomana ny fikandrana Skype eo an-tampony foana - sokafy ny varavarankely ary kitiho ny Win + S. Raha mila mitazona ara-potoana ny varavarankely koa ianao isaky ny manomboka, azafady, vakio eto ny fomba ahafahanao manidy ny varavarankely (ao anatin'izany ny Skype mazava ho azy) hatrany hatrany hatrany eo am-piandohany.
Misy fampiharana ho an'ny overlay MS Gaming?
Na dia tsindrio Win + G aza ianao rehefa milalao lalao, dia hiseho ilay popup 'mila fampiharana vaovao ianao hanokafana ity ms-gamingoverlay' ity. Windows dia manome safidy hitady rindranasa ao amin'ny Microsoft Store saingy azo antoka fa tsy mahomby ny fikarohana amin'ny alàlan'ny fampiharana izay afaka mitantana ny protokolony ms-gamingoverlay.
Inona ny kaody lesoka momba ny overlay MS Gaming?
0xD000000D, 0x80072EE7, 0x80072EFD, sns. Dia kaody hadisoana mahazatra. Ho fanampin'izay, afaka miaina lesoka hafa ianao - ms-gaming overlay. Na dia tsindrio Win + G aza ianao rehefa milalao lalao, dia hiseho ilay popup 'mila fampiharana vaovao ianao hanokafana ity ms-gamingoverlay' ity.